Maadey oo Jalwada Kenya lagu Sheegay! – Rasaasa News
Apr 24, 2010 dirir, ibraahin, jalwo, maadeey
Dood uu dhex dhigay TV Aljazeera saddex nin oo ka tirsan dadka iskuhaya siyaasada dhulka Somalida Ogadeeniya, ayaa lagu weeraray Maadey laguna sheegay nin aanu xaq u lahayn in uu ka hadlo arimaha dhulka Somalida Ogadeeniya.
TV Aljazeer, ayaa u qabtay dood saddex masuul oo ka kala socda saddexda dhinac oo ah; Maxamuud Dirir oo ku hadlayey afka xukuumada Itobiya, Sheekh Ibraahin oo ku hadlayey magaca gudoomiyaha jabhada Uwslf iyo Cabdiraxmaan Maadeey oo ku hadlayey magaca kooxda Jwxo-shiil.
Dooda ayaa waxay ku saabsanayd heshiiska hor dhaca ah ee dhex maray Itobiya iyo ururka Uwslf, waxaana uu wariyuhu wax ka waydiiyey heshiiska. Dirir iyo Sheekhu waxay isla qireen in heshiisku uu yahay mid loo baahnaa, isbadal weyna u keeni doona dadweynaha ku dhaqan dhulka Somalida Ogadeeniya. Maadeey ayaa isagu ku dooday in uu ka xun yahay heshiiska, waxaana uu sabab uga dhigay Itobiya daacad kama noqondoonto heshiiskaasi.
Sheekh Ibrahin ayaa cadeeyey in kooxda Jwxo-shiil, ay ku jiraan heshiis hoose, arintaasna waxaa noo cadeeyey masuuliyiinta Itobiya, Dirirna wuu qiray. Waxayna ka xun yihiin buu yidhi wadaadku “in aan anagu iskana ula galo heshiis Itobiya.”
Maadeey oo lix iyo tobankii sano ee ugu dambaysay ku noolaa dal weynaha Ingriiska, gaar ahaana magaalada London oo ah meelaha aduunka ay dadku ugu xaragada badan yihiin, ayaa kolkii uu TV-ga soo fadhiistay ay ka maqnaayeen Ilkaha hoose oo dhan.
Dadweynihii fiirsanayey dooda TV-ga ayaa isweydiiyey maxaa ku dhacay ninkan, waxaase furay su,aasha ay isweydiinayeen dadku Maxamuud Dirir oo ku sheegay Maadey in uu yahay Kenyan, sanooyinkii ugu dambeeyeyna joogay dalka Somaliya, Maadeyna hadalkaas kama jawaabin.
Kenya, ayaa waxaa jira qabiil la yidhaahdo Jalwo, dadkaas oo caado u leh in ay ilkaha hoose jabsadaan iyaga iyo wixii dhiigoodu uu ku jiraba. Waxayna dad badani isweydiinayaan nin jooga London ilko ma gashan waayine Jalwo ayuu wax u galaa Maadeey meel uu ka soo raacayba.
Ethiopian Opposition Express Discomfort Over AU Election Observer Mission